1. Kisimusi, mwaka unofadza wekuguma kwegore apo chando chinotonhora chiri kupinda mukati. Nhasi tine dhizeti menyu. Izvi zvinowedzera mufaro, kunakidzwa uye kudziya kumhuri yatinoda. Inogona kuzora zvinonaka pamwe chete nemhuri yese Kugadzira mamiriro akanaka uye ndangariro, pamwezve nyore kugadzira, kuravira kunonaka uye nyore kugadzirira maturusi. Kazhinji inowanika muzvitoro zvine nzira inoputika yekugadzira chokoreti, zvinori nyore asi zvinonaka • Chokoreti (Rima, Mukaka) 200 g • Marchmello 100 g • Mukaka mutsva (wekubika uchinwa) 1 mukombe wagadzirira, ngatiendei neanopisa chocolate mabhomba.
2. Sungunusa chokoreti pamusoro pemhepo yakadzika kubva pamota. Inofanira kuputswa kana kutemwa kuita zvidimbu zvidiki kuti chokoreti inyunguduke nyore.
3. Gadzirira iyo silicone muforoma, girosa 1 kutenderera isina unsal bhata kana maorivhi, dururira chokoreti yakabikwa pamusoro peforoma. Uye isa mufiriji kwemaminitsi gumi kuitira kuti chokoreti itonhorere kuita cubes uye kuumbika zvinoenderana neforoma yatakasarudza. Inowanzo shandiswa sedenderedzwa kudhinda. Nekuti iwe unogona kuisa girazi uye woona yakanaka denderedzwa denderedzwa
4. Kana chokoreti iri muchimiro Unwrap uye firiji. Wobva waburitsa muforoma, pukuta woisa chokoreti uenderere mberi kusvikira huwandu hwacho hwaringana.
5. Kana chokoreti yaoma Uye uwane nhamba inogutsa Isa maruva pakati nepakati. Ipapo sangweji chokoreti yepamusoro uye yepasi Vhara rakakamurwa denderedzwa neimwe yakasara chokoreti. Sculpt mune yakanaka yakatenderera chimiro Uye chiise mufiriji zvakare, zviri nyore uye zvakanyanya kukosha, vana vanofarira uye vanonakidzwa nezviitwa zvavanoita nemhuri yavo, hongu, zvakakosha maitiro ekugadzira anopisa chokoreti mabhomba zviri nyore, chero munhu anogona kuzviita, asi maitiro acho haasati apfuura. Ngatitarisei kuti tingaidya sei kuti tiwedzere kutapira uye kudziya mwaka uno weKisimusi neGore Idzva.
6. Nzira yekudya inopisa hot chokoreti mabhomba
7. Gadzirira yakanaka mukombe yakakura kudarika mabhokisi echokoreti atakagadzirira. Kana kuti uwane mamiriro eKisimusi Edza kusarudza nyowani nyowani, inopenya tsvuku, kana girazi rine chiratidzo chemutambo. Wobva wabika mukaka nyowani pamusoro pekupisa kushoma, uchikurudzira kusvika mukaka watanga kusvika pamwedzi uye hutsi hunodziya hwayerera kumusoro, durura mukaka unopisa mugirazi remabhombu echokoreti.Mukaka unopisa uchanyungudutsa chokoreti zvishoma nezvishoma uye uchinhuwirira kana uchinwa. Unonhuwirira mukaka wakasanganiswa nekunaka mellow chokoreti. Pakudya chipunu Marshmallows icharatidza iyo inotapira kuravira. Uye inonaka uye inonaka Inopa unodziya mushoko rega rega
8. Zvipo zvakanakisa rudo, kudziya, uye kuvapo kwemhuri. Itai zvinhu zvinonakidza pamwe chete pazororo Kuita ndangariro dzinonhuwirira kutapira Maitiro ekugadzira inopisa chokoreti blast Kugadzira iyo nguva yemufaro yakanyorwa kureba sezvinobvira